Ehe, isu tatova neyekutanga-bato mabheseni kuitira kuti HomePod isabatise tafura | Ndinobva mac
Ehe, isu tatova neyekutanga-bato mabheseni kuitira kuti HomePod isatsvage tafura
Vamwe vagadziri havamirire kwenguva yakareba kana vaona mukana wekugadzira zvishandiso zvemidziyo yekambani yeBite Apple. Isu tese tinoziva kuti izvi zvechitatu bato accessories zvinofambisa mari yakawanda uye Zviripachena kurega mukana uchipfuura hausi chikamu chePad & Quill zvirongwa zvefemu.
Mune ino kesi, izvo zvatiinazvo patafura ndezvimwe zvisinganzwisisike zvekushandisa uye tinogona kutaura kuti chimwe chinhu chisina musoro, asi isu tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe wevane rombo rakanaka varidzi vePambaPod vanozozvitengera izvi usatswe tafura nekutetereka kwainoburitsa.
Kana isu tichitaura nezve zvishongedzo zvemafoni nhare, makesi, mabhatiri ekunze, tambo, mahedhifoni kana zvakafanana zvinouya mupfungwa, mune ino kesi izvo zvatinazvo patafura chishongedzo icho ichaita muchimiro checasters kuitira kuti isafambe kana kunyange kukwenya tafura sezvazvakaitika kune vashandisi vakati wandei wespika.
Vadziviriri ava vanoita kunge ndiyo chete mhinduro kudambudziko rakaonekwa uye ndiko kuti Apple pachayo yakatogadzirisa iyo HomePod webhu chikamu mavanotsanangura kuti tingakunda sei izvo mamaki akasiiwa nechigadzirwa pane mamwe matanda akavezwa akabatwa nevarnish kana nemafuta.
The brand Pad & Quill inopa pawebhusaiti yayo denderedzwa dziviriro ye $ 19,95 yeavo vashandisi vanoda kuisa base pane mutauri uye kuti haikonoro kumusoro. Chokwadi hauzove iwe wega kuva nerudzi urwu rwezvishongedzo mune yako chigadzirwa katarogu yeiyo HomePod, asi yaive pakati pekutanga kuitangisa kuti itengese-kutengeswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Ehe, isu tatova neyekutanga-bato mabheseni kuitira kuti HomePod isatsvage tafura